[updated]Izay fantatro tamin'ny tontolon'ny Asabotsy 24 janoary 2009 | Hevitra MPANOHARIANA
Manahy aho fa lany andro amin'ny filaharana ny Malagasy.
• Ny any amin'ny firenen-kafa anefa dia iadiana varotra ny iasana asabotsy sy alahady ;
• Ny rivo-doza sy ny aterany aza mamely ;
• Telo taona sisa dia ho avy indray ny fifidianana loham-pirenena. 3 taona ve dia tsy andry ka anaovana an'izao asa tsy tàn-dalàna izao ?
Mieritrereta ihany ry Malagasy fa mampihemotra izao.
Nampidirin'i Zakilinina @ 12:47, 2009-01-24 [Valio]
fanehoan-kevitra no atao ka tsy ilaina miandry telo taona vao hanao izany.
Nampidirin'i demokraty @ 13:01, 2009-01-24 [Valio]
za dia gasy aty france ny mampalahelo dia isika gasy tsy manana hazondamosina ataon i la frantsa miady antrano i tgv dia maivandoha jereo anie ny fomba fiaingany e! mitovy andr8taloha tsy inona no tiako ho lazaina fa ireo very seza no ao ambadika tadidio ry malagasy fa i frantsa anie ka te ho score @fitrandrahana ny petrole e! te hajanaka antsika foana izy nefa ny manao visa aza tsy omeny na dia hoe haka vacance ary sauf ireo mpanao politika sy ny fianakaviany, jereo anie etazonia e!!fa maninona aho no tsy mahazo alalana ; democratie anie izao hoatran'i tgv;hazavao fa ts azoko ny tianao hambara
Nampidirin'i snoopy @ 13:42, 2009-01-24 [Valio]
fa mahavariana tokoa iny varatra nirefotra vantan' ny vao voalaza hoe midina eny @ 13 mey iny an ...
sarin' ny dia avy eo @ 13 mey nankany ambodivona eto: http://tinyurl.com/bewx8n
Nampidirin'i saveoursmile @ 13:44, 2009-01-24 [Valio]
Tsy fanehoan-kevitra mihitsy no ataon'i Andry fa fanonganam-panjakana amin'ny alalan'ny fandikan-dalàna. Raha tia azy avokoa ny Malagasy dia asaivo miandry 3 taona izy fa hahazo 100%. Izaho koa moa anisan'ireo hanohana azy.
Nampidirin'i Manahy aho @ 13:49, 2009-01-24 [Valio]
Hatao ahoana moa
Ry namana izay mampiandry telo taona, marina fa tsy ela izay telo taona izay, fa zao, betsaka ny zavatra afaka mitranaga ao antin'izay, zavatra tsy azo iverenana ny ankamaroany.Fa tsy niandry ny razatsika teo aloha raha niady amin'ny fahaleovan-tena, tsy niandry isika tamn'ny 1972, tsy niandry isika tamin'ny 1991, tsy niandry isika tamin'ny 2002, ka maninona izao no hiandry azy handry am-piadanana. Ravana ny eo, tonga ny manaraka, tsy mety ny ataony, de ravaina indray, efa nambara ampahabemaso mihitsy tamin'ny 2002 fa anatra ho an'ny manaraka iny, ka inona no mbola hisalasalana? ny fahantrana no vahavalo tsika , fa tsy ny olona , ka izay afaka hiady amin'io ihany no ho deraina, 6 taona izay tompoko , ampy izay...
Nampidirin'i keta @ 14:13, 2009-01-24 [Valio]
Ary dia angonina ny mpianatra hatao tohatra fiakarana hitondrana ny tetezamita! moa ve tsy efa hoe "sambory aho" izay efa notadiaviny hatramin'izay izao hataony izao? Marina fa hoe vonona hitantana ny tetezamita izy nefa efa miaraka amin'ny asa avy hatrany ny ataony...
Nampidirin'i jia @ 14:20, 2009-01-24 [Valio]
Hatao ahoana moa 2
ny mitabe tsy lanin'ny mamba,
ts misy tohatra fiakarana ny eo , fa ny mpianatra maro an'isa ary hoavin'ny firenena , fa tsy maintsy misy olo iray mitarika de iny no arahina , mety ho ianao, mety ho izaho, mety ho i Andry, heritaona alohan'izao ve de nierstreritra ny maro hoe i Andry afaka hanao hetsika toy izao?
Nampidirin'i keta @ 15:03, 2009-01-24 [Valio]
Nampidirin'i @ 16:18, 2009-01-24 [Valio]
Tsy zakantsika ny demokrasia
Tsy mbola zakantsika ny demokrasia kanefa tsy omena tsiny ny Malagasy fa mila fotoana lava izany. Ny demokrasian'ny gasy hatramin'izao dia demokrasiam-boalavo izany hoe fandravana efa toy ny fitokonana, filaharana, fanoherana. Diniho tsara fa vitsy ny filoham-pirenena malagasy voafidy taorian'ny nahatapitra ny mandat'ny filoha teo aloha. • Ratsiraka tonga teo amin'ny fitondrana tao aorian'ny hotakotaka lehibe (1975). • Izy ihany no nandimby ny tenany ary voaongotra. • Zafy dia tonga teo amin'ny fitondrana tao aorian'ny hotakotaka lehibe (1991). • Tsy nahavita hatramin'ny farany fa voaongotra tamin'ny alalan'ny empechement. • Ravalomanana dia tafakatra teo amin'ny fitondrana tao aorian'ny hotakotaka lehibe (2002) ary nandimby ny tenany. Izay handimby an-dRavalomanana alohan'ny fahataperan'ny mandat-ny dia hiverina amin'ny 30 taona lasa na mahery. Araka ny hevitro dia aleo ho vita soa aman-tsara ny mandat an-dRavalomanana ka izay handimby azy eo dia ho reharehantsika satria amin'ny fomba demokratika no hahalany azy. Samy ho faly isika amin'izay.
Nampidirin'i Demokrasia ? @ 16:51, 2009-01-24 [Valio]
demokrasia ve ?
Tsy mbola zakantsika ny demokrasia kanefa tsy omena tsiny ny Malagasy fa mila fotoana lava izany. Ny demokrasian'ny gasy hatramin'izao dia demokrasiam-boalavo izany hoe fandravana efa toy ny fitokonana, filaharana, fanoherana. Diniho tsara fa vitsy ny filoham-pirenena malagasy voafidy taorian'ny nahatapitra ny mandat'ny filoha teo aloha.
• Ratsiraka tonga teo amin'ny fitondrana tao aorian'ny hotakotaka lehibe (1975).
• Izy ihany no nandimby ny tenany ary voaongotra.
• Zafy dia tonga teo amin'ny fitondrana tao aorian'ny hotakotaka lehibe (1991).
• Tsy nahavita hatramin'ny farany fa voaongotra tamin'ny alalan'ny empechement.
• Ravalomanana dia tafakatra teo amin'ny fitondrana tao aorian'ny hotakotaka lehibe (2002) ary nandimby ny tenany.
Izay handimby an-dRavalomanana alohan'ny fahataperan'ny mandat-ny dia hiverina amin'ny 30 taona lasa na mahery.
Araka ny hevitro dia aleo ho vita soa aman-tsara ny mandat an-dRavalomanana ka izay handimby azy eo dia ho reharehantsika satria amin'ny fomba demokratika no hahalany azy. Samy ho faly isika amin'izay.
Nampidirin'i zakilinina @ 16:55, 2009-01-24 [Valio]
Tsy araka intsony ny zava-misy ao Antananarivo ao, mba amoahy sary tena izy fa tsy sary fahatany no alefa ry akama à.
Nampidirin'i BIGOSY @ 17:07, 2009-01-24 [Valio]
RE: demokrasia ve ?
Ny antony ry havako de tsy ho lany mihitsy ny olona iray raha mbola milatsaka ny mpitondra hosoaloana satria tsy maintsy misy foana ny hala -bato, ka io no sisa hevitre, de ny manala azy ankeriny
Nampidirin'i keta @ 17:14, 2009-01-24 [Valio]
tena ho lasa ministry ny internety izany i barijaona k'ty :-)
Nampidirin'i Rajiosy @ 18:12, 2009-01-24 [Valio]
heil ve ?
izany eo ihany fa ilay izy dokam-barotra vita ho azy ho an'i Orange no mampihomehy ahy !
Nampidirin'i Rajiosy @ 18:13, 2009-01-24 [Valio]
TSY MATOTRA NY FANAOVANA POLITIKA
Mahavariana fa dia manameloka ny fihetsika andalambe ataon'ny TGV ny TIM nefa avy tao ihany no nahazahoany fahefana, sady te-hanao contre-manifestation indray amin'ny 31 Janvier, tsy maintsy ho izany ve no tena lalana tsy maintsy aleha,
Mba manangonkevitra ny TVM dia tsy mba manao zavatra tena izy fa dia olona tsongatsongaina no atao interview, dia vao maika anie manome vahana ireto TGV ireto izany é.
Tsy tokony hanana ny heriny ny TGV fa ny TIM ihany no nanome hery azy.
Aza raharahaina izay ataony fa ny asanareo tohizana dia maty ho azy io, fa aza manao provocation
Nampidirin'i tontavaovao @ 18:52, 2009-01-24 [Valio]
aza miteniteny foana
ilay tànana atsangana ve mahatonga an'i jentilisa hiteny hoe "heil" sy 1939-45 ? Toa maivana izany fa ny V na rantsatanana roa misokatra ny ahy no hitako. Ka aza miteniteny foana moa e ! Lasa tsy crédible intsony ianareo.
Nampidirin'i razafiniazy @ 18:55, 2009-01-24 [Valio]
Nampidirin'i ndrema @ 19:24, 2009-01-24 [Valio]
Rajiosy ....tsy azoko tsara ialy ministra vaovao...fa tena izy ve nampangina an'i avilavitra e?
Nampidirin'i ndrema @ 19:26, 2009-01-24 [Valio]
sary maro azonao isafidianana
an-jatony ny sary azonareo jerena ao amin'ny Flickr-n'i avylavitra. Na ny teny Ambohijatovo, na ny teny amin'ny 13 mai, na ny teny an-dàalana ho any Ambodivona, na ny efa teny Ambodivona koa aza. Mahafinaritra koa ny mahita antsika rehetra miady hevitra eto, saingy tandremo tsy ny loha no ampiadiana, fa ny hevitra no ataovy betska. Na izany aza, dia misy hadisoan'ny mpitondra ihany tsy namono ny afo tany am-piandohana. Azo natao tsara ny nampisaoty 'fusibles' ry zalahy a! Dia amin'izay tsy nivoaka ireny afera masiso nitondran'ny olona porofo miaraka amina N@ dossier sy sarintany avy any atsinanana ireny. Sa ahoana ny hevitrareo? Tahaka izay mantsy tsy nisy ny fidinana 13 mai toy iny, fa dia mba nijery izay kely vita ho fampitoniana avy any amin'ny mpitondra ny vahoaka. Nefa moa dia tonga amin'ilay tenin'ny filoha Ravalomanana izy iny hoe 'TSAPAO AOLHA NY HERINAREO', koa asa lahy!!!!!
Nampidirin'i avylavitra @ 21:34, 2009-01-24 [Valio]
Ho an'i Keta
Tsy marina ny nolazain'i Keta satria efa nahavita ny mandat-ny Ratsiraka vao nodimbiasan-dRa8 tamin'ny 2002. Andraso ny 3 taona fa aza mba kivikivy foana amin'ny fanajana demokrasia.
Nampidirin'i zakilinina @ 23:19, 2009-01-24 [Valio]
Ihomehezany mpandova an'i Frantsa
Faly ery izay ny Padesm, Psd, Arema, Undd, CRN sy ireo rehtra mpandova an'i Frantsa, na ireo mipetraka eny Ivandry, na Tamatave, na Paris. Efa miady antrano ianareo mianakavy, ka ho mora ny fiverenanay mianakavy hitaingina anareo 25 toana indray e! Vive Assidu, Madagasikara (ki)soa, sy Madagate mpandrangitra...kely sisa hoavy indray zahay e!
Nampidirin'i ketabozy @ 23:49, 2009-01-24 [Valio]
manitikitika ny saina ihany ity raharaha iray ity! ndraindray aza ny tenanay toy lasa vinany hoe angamba olona ao @ fitondrana @izao fotoana izao ihany no tena rangory fototry ny afo saingy tsy afaka miseho sehatra noho ny antony samihafa. Ny antony ilazako izany dia tsotra: efa fantatra sy nalaza ny fihaonana nataon'i Ben'ny Tanana talohan'ny 13 janoary. T@izay mbola ny VIVA TV no nangatahiny. VIVA TV izay tsy mahenika afatsy Analamanga, ary tsy afaka hilahatra @ MBS sy TVM mihitsy. Raha nosokafana io, rehefa vita sy sazy satria nandefa sarin'olona sy feon'olona mampitahotra be, dia ho tsy afaka niroso t@ izao dingana izao ny Ben'ny Tanana, satria voavaly ny fangatahany. Saingy, naleo tsy nositranina t@ anamalaho fa aleo ripaka daholo ny akoho hitsaboana azy (bizina rahateo koa izany), fa nahoana? sa hoe izay no didiko? mampahatsiahy teny kely voalaza t@ kabary fony vao lany fanindroany i ra8 "izaho zao no eto ka izay tiako atao no atao". Nefa ilay tiany atao lasa sangy mihoatra ny loha koa, ary ny mpandraharaha malagasy izay mba nanana ny toerany teto dia mahatsapa izany avokoa! Na dia momba ny fitakiana fiovana (tsy fanonganam-panjakana akory an!) aza ny tenako, satria maro loatra ny tsindry hazo lena mianjady @ gasy ary anisan'izany ny tena, dia tsy mankasitraka ny fitarihana korontana! satria manjary milahatra mitovy @ ilay eo an-toerana ihany! maty manararaotra ny hiavian'ny sommet de l'UA koa manko ry pilitikianina isany dia manao boycott e! satria raha dila io d tsy misy occasion hafa raha tsy @ francophonie indray!
Nampidirin'i leo korontana @ 03:40, 2009-01-25 [Valio]
Nampidirin'i leo korontana @ 06:44, 2009-01-25 [Valio]
HOo an'i zakilinina
marina fa tapitra ny dimy taona tamy 2002fa tsy nisy zavatra nazava anie ny fifidiana tamin'iny , fa tsy maintsy nalaina ankeriny vao azo.
Nampidirin'i keta @ 11:37, 2009-01-25 [Valio]
tena tsy mahalala izay fikan'i avylavitra sy i barijaoana aho fa @ ilay hoe ministry ny intenety - dia hadrohadro hoe ministry ny internetin'i tgv no resahiko satria misy koa mpiblaogy manohana ny tgv.
efa miresaka an-dry barijaona sy ry tgv mbamin-dry ra8 ihany : tsy hitanareo hoe adin'ny mpanarivo ve ilay izy ? hoy ny karana hoe "rehefa miady ny elefanta dia ny bozaka mandaday ihany no tena voahosy".
tena "tsy vive la démokrasian'"ny mpanankarena k'lelika e
Nampidirin'i Rajiosy @ 13:18, 2009-01-25 [Valio]
Mailaka voaraiko. Ataovy toy ny voankazo an'ala...
Ny « LOJIKAN'NY FIFANDONANA » tetikadin'i Andry Rajoelina miaraka
amin'ireo mpanao politika tranainy sy ny firenen-dehibe iray.
Mpianatra ety amin'ny Oniversite ny tenako. Tamina mpianatra eny amin'ny
Oniversite iray antsoina hoe "Dominique" na "Radomi" no nandrenesako
izao resaka izao ka tsy mandry ny eritreritro raha tsy manaparitaka azy aminao.
Diniho ny zava-misy ,fa ny tantara no hitsara.
Efa volana maromaro
no niketrehan'i Andry
TGV ny tetika. Ny tanjona dia ny handrodanana ny
fitondrana amin'ny "fitakiana an-dalam-be". Ny vola efa nahazo betsaka, ny
fitaovana izay ilaina misy. Ka izao no paik'ady:
1. Vidina ny Radio sy TV RAVINALA ka soloina VIVA hahafahana manamboatra
tsikelikely ny sain'ny vahoaka hankahala ny fitondrana sady hanaovana ny
propagandy hahazoana ny fitondrana ny tanànan'Antananarivo
2. Tamin'izany no efa nisy nilaza fa volan-DRatsiraka sy Pierrot
Rajaonarivelo no nampiasainy fa tsy nino ny olona.
3. Tsy ho resy vetivety ny fahantrana ka io no asaina ventesin'ny mpanao
politika izay miteny.
4. Kitihina ny fanavaozana ny fianarana ary averimberina fa fanagasiana
tamin'ny 72 io. Hatao fitaovana amin'izany ny Katolika izay ao
ambadik'ilay firenena tsy tononina.
5. Karamaina ny mpianatra eny sasantsasany eny amin'ny Cité Ankatso mba
hanamboatra "cocktail Molotov"
hatsipy handoroana tranom-panjakana
6. Karamaina ny jiolahy handroba fananan'olona mba ilazana fa tsy misy
7. Karamaina ny olona maro mba hitarika fihetsiketsehana any amin'ny faritra
sy hitarika grevy.
8. Vidina vola ny mpanao gazety maro mba hivoy ny hevitra fankahalana fanjakana
sy hivoy fa sakantsakan'ny fanjakana i Andry TGV amin'ny fanatanterahany
asa maha ben'ny tànana azy
hany ka tsy vitany asa. Tokony hivoy koa ireo mpanao gazety ireo fa tsy
milamina ny tànana.
9. Atao ny tetika rehetra mba tsy hisian'ny " Fivoriambe-faratampon'ny
Firenena Afrikana"eto Madagasikara satria hoe misavorovoro eto..
10. Tsy hisy hoazy araka izany ny fivoriamben'ny tany miteny Frantsay
11. Tsy avela ho tody hatrany amin'ny fifidianana ity fitondrana ity fa tsy
maintsy arodana alohan'izay. Satria mantsy amin'izay fotoana izay efa misy
betsaka eo amin'ny fiainam-bahoaka ny MAP ka ho sarotra ny handresy azy
12. Tsy maintsy mirodana ary tsy maintsy tafiditra ao anaty velam-pandrika ny
fitondram-panjakana ka ny ambon-DRavalo no hamelezana azy.
13. Asaina miteniteny foana ao amin'ny VIVA RATSIRAKA ary dia tsy maintsy
hanidy an'ioTV io ny fitondram-panjakana.
14. Aely ny tsaho fa ho
samborina I Andry TGV. Io fisamborana azy io no tena
15. Hetsehina amin'izay ny vahoaka mba hitaky fa tsy misy ny "
DEMOKRASIA" eto Madagasikara..
16. Ampiasaina ny radio VIVA, Ny radio ANTSIVA, ny TV Plus, ny La Gazette de la
Grande ile , ny LA verité sns mba hitarika ny olona hanaraka an'I TGV sy
17. Ny resaka atao dia hanamboarana ny sain'ny olona mba hankamamy indray eo
amin'ny sehatra politika ireo goaika antitra very seza efa fantatra.
Fa ity no tena loza : Ny«
LOJIKAN'NY FIFANDONANA » tetikadin'i Andry
Rajoelina miaraka amin'ireo mpanao politika tranainy sy ny firenen-dehibe
a) Rehefa tsy mampiasa "FORCE" ny fanjakana dia terena hanao izany mba hisy
faty olona indray eto Antananarivo.
b) Noho izany dia taritina ny olona hirohotra hanao ankeriny hamoa ny TV VIVA.
Efa misy mpitarika nahazo vola hanao an'io. Tsy
maintsy hampitandrina ka hanao
tifi-danitra sy hampiasa fitaovana mampilatsa-dranomaso ny mpitandro ny
c) Ary eo no hisy karamaina hitifitra ny vahoaka ary dia hovelona ny saritaka.
Iodia tsy mazava na ao amin'ny tafika no voakarama na ao anaty vahoaka hanao
an'io fitifirana io.
d) Raha tsy mety ny eny amin'ny VIVA dia taritina ho eny amin'ny
Ministeran'ny Vola indray ny vahoaka, sady efa eo akaiky eo rahateo
Ambahitsorohitra, mba hitaky ny fialan'ny Minisitry ny Vola hono araka ny
resaka efa nataon'i Roland
Ratsiraka sady naverin'I Andry TGV teo
Ambohijatovo. Tsy maintsy hampitandrina ka hanao tifi-danitra sy hampiasa
fitaovana mampilatsa-dranomaso ny mpitandro ny filaminana. Ary eo no hisy
karamaina hitifitra ny vahoaka ary dia ho velona ny saritaka syny savorovoro.
e) Hampiaka-peo toy ny fanaony avy eo ireo mpanao politika toa an-dry Daniel
RAMAROMISA sy ny forongony mba
hitaky ny tetezamita hiverenan'ireo mpanao
politika saribakolin'ilay firenen-dehibe eo amin'ny fitondrana.
hanjakazaka eto amin'ny firenena io firenen-dehibe io satria hiverina ireo
(2) Mbola vao mainka hahantra ny vahoaka satria hitsitongana ny vola gasy noho
ny fikorontanana hatao eto amin'ny firenena.
(3) Mbola tombotsoan'ilay firenen-dehibe ihany io.
(4) Tsy hisy ny fandrosoana eto satria hiady saritaka indray ireo mpanao
politika izay hiady seza samy hilaza fa izy
no namono ny voay. Tsy ny rehetra
anefa no hahazo seza, fa izay efa votendrin'ilay Firenen-dehibe ihany.
Ny fitiavako tanindrazana no nanosika ahy hilaza izao tsiambaratelo izao aminao
mba hilazanao ny havanao mba tsy sanatria no ho lasa sorona ho fatifaty foana na
haratra foana hampiakatra an-dry zalahy eo amin'ny sezany. Raha anisan'ireo
nahazo vola moa maninona,
fa raha entim-po amin'ny resabe no tena mampalahelo.
Tsy misy mahay manao fahagagana eto ka afaka hanafoana ny fahantrana ao
anatin'ny taona vitsivitsy.
amin'ny zava-misy ireo voalazako ireo.
Ny fanompoam-pivavahana saika natao teo Ambohijatovo. Ny fanokanana ny
kianjan'Andohalo izay natao kimaimaika, hany ka vao avy ny orana dia nirodana.
Ary ny nampalahelo aza nandratra olona mihitsy io firodanana io satria
nianjeran'ny tafo tao ireo olona sendra nialoka. Tsy efa fambara
ataon'Andriamanitra ve io. Iza no
namatsy vola nanamboarana io kianja io ? moa
tsy ilay firenen-dehibe ve ? Nahatadidy rahateo ny isika fa tsy io mihitsy ny
planina nasehon'i Andry Rajoelina fony izy nanao propagandy tamin'ny
fifidianana ho ben'ny tanàn'Antananarivo. Mihevitra izy mantsy fa tsy nisy
nahatadidy ireny. Ny sarintsarim-pitokanana ny kianjan'ny Demokrasia teny
rehetra ireny dia mizotra any amin'ilay "lojikan'ny fifandonana
hanaovana sorona indray ny vahoaka".
Raha tia tanindrazana ianao dia aelezo ity amin'ny mailaka na amin'ny fomba
ekena fa mampandroso ny DEMOKRASIA ary ny fototra lehibe amin'ireny dia ny
fifidianana. Tsy misy afaka hilaza fa DEMOKRASIA ny fitarihana ny olona haka
fahefana eny andalam-be!
Tsy misy afa tsy ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana
ihany no filaminana sy fampandrosoana ny
Samia mandinika vao manao zavatra ho tombotsoa ambonin'ny firenena ! Mbola
fotoana izao hieritreretana.
Ny Kristianina aoka hivavaka fa tandindomin-doza ny firenana.Tsy maintsy ho
sambatra isika raha manana an'Andriamanitra ho tokin-tsika.
Nampidirin'i ketabozy @ 14:37, 2009-01-25 [Valio]
samy tsy homme d'état izy 2 lahy, télévision nidina ve de tsy azo ifandaminana fa de be maarenina le 8, ahitany raharaha io, de aiza ny intérêt de la nation am zany saron'ny intérêt personnel. Tsy tokony hitondra fanjakana raha toy izany ny foto-pisainana. Afaka herinandro 5000 ARIARY ny 1 EURO raha raikitra eo ny rotaka BOZY
Nampidirin'i lalaharinivo@yahoo.fr @ 07:26, 2009-01-26 [Valio]
izaho dia 'mpi-surf'. moa ve afaka alefako anaty facebook ny pejinao ho hitan'izay tsy tafandalo eto ka mpinamana ao?
Nampidirin'i Namana @ 12:24, 2009-01-27 [Valio]
Tsy dia mampaninona ahy loatra ka!
Nampidirin'i jentilisa @ 16:01, 2009-01-27 [Valio]
-Mahita zavatra hanoherana an'i Andry foana ny fitondrana ka haharatsy laza azy.
-Ny tany nonotofana eo Andohatapenaka, izay tsy ara-dalàna. Moa ve mba fantantsika mazava ny tena anton'io fanotofana io?
-Io Force One izay novidiana io, volan'iza io?
-Ny hetra alain'ny fanjakana amin'ny karaman'ny olona sy izay rehetra mihetsika eto, moa ve nampihena ny fahantrana tokoa ilay izy? toa vao maika aza mahakivy ireo izay mba miasa.
-Ny vola izay natotan'ny PDS sy ny fitondrana tao amin'ny Imprimerie iray teto Antananarivo, ara-dalàna ve izany?
-Ny trano izay vao atsangany eo Faravohitra, dia milaza marina ny tenako fa 15 000 fmg na telo arivo ariary tompoko no nividianany an'io tany io sady natao an-keriny. Vokany, maty nohon'ny aretim-po ilay tompony.
-Ny tsy fahafahana maneho hevitra amin'ny alalan'ny radiom-pirenena sy ny toy izany, ny tsy fahafahana mandray ampahadiovan-tsaina ny hevitry ny olona sasany, ny fanaovana didy jadona, ny fanenjehana ireo mpanao politika hita fa matanjaka noho izy, mety aminareo ve izany?
-ny société OLAM, izay Maorisianina no tompony, vao haingana no niala sy voatery niala teto madagascar satria nomena ny ramatahora. Mpanao exportation ana vary mena,... any ivelany izy io, izay mampiasa malagasy maromaro, kanefa dia nampatahorin'ny ministera tsy maintsy nakatona satria voalaza fa hoe marcher an'i Magro io. Moa manaiky an'izany ve ianareo.
-Ny fanagasiana ny fianarana, efa avy voa teo izahay ka mino aho fa na ianaro koa aza tsy manaiky an'izany.
-Ny resaka DAEWOO, dia tanin'iza indray no ho voatery homena azy?? ny tanindrazako tsy homeko intsony. Ny malagasy anefa dia ho toy ny mpiasa tsotra fotsiny fa tsy misy tena tombony mivaingana ho azy izany.
-Ny lavanila, nahoana re no nidina ny vidiny e?? tsy te hilaza azy aho fa aoka ho fantatrareoi izao, ny filoha ra8 dia mivarotra vanila lafo be kanefa dia alainy mora amin'ny gasy izany.
-Nahoana re no kapaina amin'ny ranjony avokoa ireo mpandraharaha malagasy mba mandroso e? diniho raha mba mahita mpandraharaha malagasy lehibe intsony ianareo, fa efa lasa sesitany sy voapanga avokoa izy rehetra, toa an-dry Edgar Razafindravahy tompon'ny Kobama satria efa re fa hoe hifaninana aminy amin'ny manaraka, les 3 frères izay nahafahany nanjaka tokana teo amin'ny sehatry ny PPN, mba hananganany ny magro. betsaka e... raha tsy mino ianareo dia mandehana manontany, fa ho tantaraiko anareo koa izay efa nataony.
-Ny vola azony amin'io resaka ady amin'ny sida io, mba firy isanjato amin'ireny moa no tena miasa marina? mieritrereta.
Sao de lava loatra fa izao e!, izay tena mbola manohana azy dia efa mieritrereta izay hitontonana rehefa mba lasany koa ny fanananao. Tsy adalan'ny olona ny manao tolona na inona na inona mety vokany na ratsy na tsara, satria tsy misy intsony ny fomba ahafahana maneho fa tsy mankasitraka ny fanaony ny vahoaka. Ka raha tsy i Andry ary dia Iza???
Amiko, tsy te hijery aho hoe i Andry na iza, fa io aloha no tsy mbola lasa any am-pona afaka ny hanohatra azy dia manohana azy aho. Lazaiko fa efa tamin'iny fifidianana tamin'ny 2001 iny aho no nifidy farany ary tsy nisy intsony taorian'izay satria leo ra8 ka tsy nanao intsony.
Farany, marina fa nisy vokatra tsy nampoizina iny fihetsiketsehana iny, kanefa minoa ahy ianareo fa mbola ho ratsy ny tantana raha toa ka mbola izao fiavonavonan'ndra 8 izao no mitohy.
Nampidirin'i Ylan @ 13:32, 2009-01-29 [Valio]